Allgedo.com » Dagaal ka dhacay Magaaladda Kismaayo iyo xaaladda sakaay
Home » News » Dagaal ka dhacay Magaaladda Kismaayo iyo xaaladda sakaay Print here| By: allgedo.com:
Jawaabaha waa la xiray Dagaal xooggan ayaa Al-Shabaab iyo ciidamada huwanta ah ku dhexmaray xalay Magaaladda Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose.
Dagaalkan ayaa ka danbeeyay kadib markii ciidamada Shabaab ay weerar xoogan ku qaaden farisimo ay ciidamada kenya iyo kuwa dowlada gudaha Magaaladda ku leeyihiin.
Lama oga qasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay dagaalkan ka dhacay gudaha Magaaladda., waxaana uu noqonayaa dagaalkii ugu xooganaa ee ay waayadan maqlaan dadka Kismaayo.
Saraakiisha dowlada ayaa ka gaabsaday in ay ka warbixiyaan dagaalkan ka dhacay KIsmaayo waxaana soconaya holwgalo ay magaalada ka wadaan.
Faah Faahin kale kala soco AOL insha Allah